Home Somali News Belgium: Shirkii EU ee looga hadlayey Tahriibta oo furmay
Waxaa Khamiistii shalay magaalada Brussels isugu tagay hogaamiyayaasha dalalka EU oo shir aan caadi ahayn ka yeeshay xalka dadka Tahriibta ah ee kusoo qul qulaya qaarada Yurub.
Shirkan ayaa horey loo sii saadaalinayey in qodobada horyaal ay yihiin kuwo aad u adag maadaama xal u helida Tahriibta ay xujo ku noqotay wadamada Midowga Yurub.
Go’aanada shirka kasoo baxay ayaa waxaa kamid ahaa:
Sare u qaadida dhaqaalaha lagu bixiyo u gurmashada Tahriibayaasha.
Dib u celinta dadka aan xaquuq ullahayn qaxootinimada.
Daba-galka iyo burburinta kooxaha Tahriibta ka shaqeysta.
Wadamada Midowga Yurub ayaa ku heshiiyey in ay sare u qaadaan miisaaniyada loogu talo galay hawlgalada lagu badbaadinayo doonyaha tahriibta sida ee bada ku dhex dega, waxaana bishii loo qoondeeyey lacag gaareysa 9 Milyan oo Yuro, halkii markii hore ka ahayd 2.5 milyan.
Dalalka Yurub ayaa sidoo kale midkiiba ku deeqay Maraakiib iyo diyaarado lagu xoojiyo ciidamada ka qeyb qaadanaya hawlgalada loo yaqaan (Triton) ee ka socda bada Talyaaniga.
Hogaamiyayaasha ayaa sidoo kale ku heshiiyey in dib loo cesho dadka aan xaquuqda ullahayn in magan-gelyo lasiiyo ama Qaxootinimo, halka kuwa kasoo cararay dagaalada tixgelin la siinayo.
Wadamada ay tahriibayaasha ka yimadaan ayaa la sheegay in loo baahan yahay in wadashaqeyn dhaw la yeesho Midowga Yurub si looga hortago tahriibta goobahaasi kasoo baxaya gaar ahaan dalka Liibiya.
Midowga Yurub ayaa sidoo kale eegaya qaabka sida sharciga ah looga hortagi karo kooxaha ka ganacsada Tahriibta loona burburin lahaa qalabka ay heystaan sida Doonyaha ay dadka soo saaraan.
Hay’adaha u dooda xaquuqul Insaanka sida Amnstey International iyo Human Rights Watch ayaa sheegay in tilaabooyinkan aysan ku filneyn wax u qabashada dadka Tahriibta ah.
Amnsty International ayaa ku tilmaamtay miisaaniyada EU-da mid aan wax badan soo kordhineyn oo ay doonayaan hogaamiyayaasha Yurub inay isaga bad baadiyaan waji-gabax ka heysta musiibada dadka bada u dhimanaya ee Tahriibta ah.